Ho an'ireo izay misintona fiaramanidina avy ao Rikooo ary tsy misy endri-javatra na soratra
fanontaniana Ho an'ireo izay misintona fiaramanidina avy ao Rikooo ary tsy misy endri-javatra na soratra
11 volana 1 andro lasa izay #995 by DRCW
Nanamarika olona marobe aho manana olana amin'ny famoahana ato amin'ity tranonkala ity, izay tsy hita any amin'ny tontolon'ny fiaramanidina, na ny plastika mainty ao amin'ny rakitra sary an-tsary. Aleo aloha hazavaina kely momba ny FSX. Nivoaka tamin'ny dikan-teny telo i Microsoft tamin'ny fametrahana azy. Ny Standard FSX, FSX Deluxe, ary farany amin'ny FSX Gold Edition. Raha manana ny Default FSX na Deluxe Editions ianao ary tsy nanavao azy ireo, dia hanana olana amin'ny fiaramanidina sy ny toerana misy anao. Nivoaka tamin'ny pandron'ny serivisy 2 (SP1 & SP2) ny Microsoft raha tsy misy ireo fanavaozana napetraka, hisy olana. Ny car Loader Rikooo dia manome asa tsara. Manome anao ny paty ilainao etsy ambany ianao, mba hanampy anao hamaha ireo olana ireo. Manantena aho fa hanampy izany
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: tuncayboran40
Fotoana mamorona pejy: 0.115 segondra